China NEW Ultra slim Aluminom n'èzí iju mmiri ọkụ 30W 50W 100W 150W 200W 300W mini led flood oriọna ndị na-emepụta na suppliers | Kasem
NEW Ultra slim Aluminom n'èzí iju mmiri ọkụ 30W 50W 100W 150W 200W 300W Obere LED ide mmiri oriọna
Oge ndụ ọrụ: 50000
Nọmba nlereanya: SF-50W
oriọna na-egbuke egbuke Flux (lm): 4000
Okpomọkụ na-arụ ọrụ (℃): -20 ~ + 50
Aha ngwaahịa: Iju mmiri ọkụ
Ihe: Smd LED ìhè Iju mmiri n'èzí
Ụdị: Ịchekwa Ike n'èzí Led Light
Igwe ọkụ LED: SMD2835
Okpomọkụ agba (CCT): 2700 ~ 6500K
Ojiji: Igwe ọkụ ime ụlọ/n'èzí IP65
Njirimara: Elu ihie
Ihe: Aluminom+ Igwe ọkụ
Isi mmalite ọkụ LED: Sanan
Ịrụ ọrụ ọkụ (lm/w): 90-100
Na-egbuke egbuke:Ìhè iju mmiri na-eji ibe ọkụ LED dị elu, 140° beam angle, enweghị onyinyo na mgbochi ọkụ. Igwe ọkụ iju mmiri nke 150W LED nwere ike dochie oriọna halogen 1000W ọdịnala, na-echekwa 80% nke ụgwọ ọkụ eletrik.
Ogologo ndụ: Azụ azụ na-anabata ụdị fin-ụdị ikpo ọkụ ọkụ, nke na-eme ka mpaghara ikuku ikuku dịkwuo elu, na-eme ka ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ, na-agbatị ndụ ọrụ nke ìhè iju mmiri.
Nchekwa na mgbochi mmiri:A na-eji ụlọ alumini na-anwụ anwụ na oghere PC mee ya. Igwefoto PC nwere usoro anya pụrụ iche, mgbasa ọkụ edo edo, anya amụma ogologo, adịghị mfe imebi, ọkwa IP66 enweghị mmiri, dabara maka ọkụ ime ụlọ na n'èzí.
Ọ dị mfe iji yana akara nkwado siri ike:Iju mmiri ahụ nwere plọg na waya ala, voltaji na-arụ ọrụ (110V AC). Ìhè iju mmiri ahụ nwere ihe nkwado ígwè na-agbanwe agbanwe nke na-agbasawanye na nke siri ike, ị nwere ike ịwụnye ya ngwa ngwa n'elu ụlọ, mgbidi, ala na ebe ndị ọzọ site n'ịgbanwe akụkụ dị iche iche.
Akwụkwọ ikike:Anyị na-enye akwụkwọ ikike ọnwa 24 na-enweghị nchegbu. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu dị mma gbasara ngwaahịa a, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na email, anyị ga-edozi nsogbu ahụ maka gị n'ime awa 24.
Ụdị No Ike/W Nha ọkụ Igwe ọkụ LED Waterproof PCS/CTN Nha mbukota
• Ọkụ iju mmiri na-emepụta ihe dị elu na-ewetara gị abalị dị mma nke nwere nnukwu ọkụ na-egbuke egbuke nke 80 lumen / watt.
• Ọ dị mfe ịwụnye ya na ihe nkwado ya siri ike, ogo 180 na-agbanwe agbanwe.
• Ụlọ aluminom na-anwụ anwụ nke siri ike na nke siri ike na-eme ka ọ dị mma.
• Na-ewetara gị ọkụ dị mma, dị ọnụ ala na ahụike karịa ihe ọkụ ọkụ mbụ gị, ihe ndozi halogen.
Ngwa ngwa jụrụ oyi & ụdị iko abụọ
A na-eme ụlọ ahụ nke aluminom na-anwụ anwụ, nke nwere ike ịmị ọkụ nke ọma site na LEDs, si otú ahụ na-amụba ndụ nke LEDs. Ọdịdị convective dị n'azụ ụlọ na-ekpochapụ okpomọkụ nke ọma. Emebere ihe niile maka ebumnuche ọkụ na-ekpo ọkụ ngwa ngwa.
I. Jikọọ eriri 3 na ọnọdụ kwekọrọ na isi iyi ike: L (agba aja aja) na waya ọkụ; N (Blue) ruo waya anọ; (edo edo/green) waya ruo waya ụwa. Biko hụ na ejikọrọ waya niile nke ọma mgbe ị na-etinye ya.
II. Idozi ọkụ na mgbidi ma ọ bụ osisi nwere skru (anaghị enye ya) ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ.
III. Mgbe emechara echichi, gbanye ma malite iji.
Ojiji dị oke ọkụ na obosara
The High Performance LED Outdoor Security Light ozugbo na-abawanye nchekwa na nchekwa site n'inye nnukwu ọkụ na-egbuke egbuke nke 80lm / watt. Na mgbakwunye, ọ bụ ọgbara ọhụrụ, ịchọ mma yana ọkwa IP66 enweghị mmiri na-eme ka ọ gwakọta na gburugburu ma nagide ihu igwe siri ike, zuru oke maka ngwa n'èzí.
- Ee, anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
2. Enwere m ike ịzụta ihe atụ?
-Sure.Biko zitere anyị ajụjụ, ya mere anyị nwere ike izipu gị sample.
3. Gịnị bụ oge ndu gị?
-Ọ dabere na ọnụ ọgụgụ na oge mana anyị nwere ike ibuga n'ime ụbọchị 7-15.
4. Kedu oge ịkwụ ụgwọ gị?
5. Kedu usoro mbupu?
- Enwere ike ibuga ya n'oké osimiri, ikuku ma ọ bụ awara awara. Anyị ga-ahụ nke kacha adabara gị. Biko cnfirm na anyị tupu ịtụ.
6. Kedu ka ị si eme azụmahịa anyị ogologo oge na mmekọrịta dị mma?
-a. Anyị na-edebe ezigbo mma na ọnụahịa asọmpi iji hụ na ndị ahịa anyị na-erite uru;
-b. Anyị na-asọpụrụ onye ahịa ọ bụla na anyị ji ezi obi na-azụ ahịa na-eme enyi na ha.
Nke gara aga: 2021 Hot Die Cast Aluminom ip66 ultra slim 10w 20w 30w 50w n'èzí edu iju mmiri
Osote: Ikuku njikwa RGB agba na-agbanwe ọkụ Iju mmiri Smart Wifi LED Iju mmiri
Onye na-emepụta Iju Mmiri 200W IP 65 led sta ...
Igwe ikuku RGB agba na-agbanwe ọkụ iju mmiri ...
oriọna Iju Mmiri 200W LED nwere oghere anya 200 watt ...